Way Ogyihiin Inaan Been U Sheegayey |
Way Ogyihiin Inaan Been U Sheegayey
Haddaba in kasta oo aanay warkii kala bogan Cabdi-kacaan saaxiibkii wuxuu u sheegay inuu caawa ku qoran yahay hannuuninta (Orientation)
Sheekadu waxay dhex martay Cabdi-kacaan oo ahaa madaxa xafiiska xidhiidhka dadweynaha ama hannuuninta ee degmada Berbera iyo nin ay saaxiib ahaayeen ka hor intii aanu u hayaamin dalka Sucuudi Arabiya oo la odhan jiray Maxamed.
Maxamed wuxuu ku soo noqday dalka 10 sanadood kadib oo ku beegnayd 1974-kii, waana wakhtiyadii kacaanku u kullula ee dadka loo cago-juglayn jiray. Dadku tawrada way ka baqayeen iyaguna way kala baqayeen.
Si kastaba ha ahaate sidii caaddada u ahayd laba saaxiiba oo kala baaday Cabdi-kacaan wuxuu Maxamed ku casuumay qado wanaagsan iyo qayilaad. Waxa ay wada fadhiisteen meel gaar ah si ay iskaga xaal waraystaan waayahoodii muddadii ay kala maqnaayeen. Haddaba
in kasta oo aanay warkii kala bogan Cabdi-kacaan saaxiibkii wuxuu u sheegay inuu caawa ku qoran yahay hannuuninta (Orientation) shaqaalaha dawladda iyo guddiyada xaafadaha magaalada Berbera sidaas daraadeed in uu ka tagayo isaguse iska sii qayilo, hadhawtana kaga daba yimaado goobta hannuuninta si ay u wada casho tagaan. Markii Xaajigu qaadkii ka soo kacay wuxuu soo abaaray madashii shirku ka socday oo wali sii socda. Xaaji Maxamed wuxuu istaagay daaqadii “hall-ka” si uu ugu sugo saaxiibkii iyo inuu dhega dhageeyo waxa meesha ka socda, wuxuu maqlay saaxiibkii Cabdi-kacaan oo madaxdii wasaaradaha iyo guddiyadii xaafadaha oo wada jira warbixin siinaya ama u sheegaya in sanadaha dhaw ee soo socda dalkeena laga dhoofin doono shidaalka, dahabka, dheemanta, yuraaniyamta iyo birta qaydhin (Iron-ore) waliba waxa dheer xoolaha nool iyo dallaga beeraha.
Waxa aan idiinku bushaaraynaya Soomaaliya inay noqonayso dalka ugu qanisan dalalka Afrika oo dhan, waxa kale oo aan idiinku bushaaraynaya in madaxweynaheeni Jaale Maxamed Siyaad Barre ku guulaystay inuu heshiisiyo labada dal ee Uganda iyo Tanzania oo dagaal ka dhex socday waana guul iyo sharaf u soo hoyatay Soomaaliya; waliba wuxuu ku talla jiraa inuu damiyo xasarado kale oo ka dhex oogan waddamo kale. Maxamed oo la yaaban beenta iyo khuraafaadka saaxiibkii ku af-rogay dadkii madasha fadhiyey ayuu haddana wuxuu la sii yaabay shaqaalihii oo sacab aan kala go’ lahayn iyo heeso kacaana dhex taal uga dhigaya khudbada Cabdi-kacaan.
Hannuunintii kadib markay labadii saaxiib isku kaliyeysteen Maxamed wuxuu wax ka waydiiyey wixii uu dadka ku akhriyayey hase yeeshee Cabdi-kacaan wuxuu si fudud ugu jawaabay “Aniguna waan ogahay in aan been u sheegayey iyaguna way ogyihiin in aan been u sheegayey”.
Akhriste sheekadan waxa aan ku xasuustay waxa aan daawaday ama dhegaystay khudbadihii wasiiro ka tirsan xukuumadda madaxweyne Siilaanyo oo socdaal ku marayey gobollada bariga Somaliland. Goob kasta oo ay tagaan iyo cid kasta oo ay la kulmaan waxay siinayeen warbixino ku saabsan xaalada dalka waxayse u badnaayeen faan iyo wax qabad ballaadhan iyo mashaariic tiro badan oo ay xukuumaddu hirgalisay waxa kale oo ay iska daba marayeen amaanta madaxweynaha JSL weedhaha lagu amaanayey waxa ka mid ahaa Somaliland waxa hogaaminaya oo ay nasiib u heshay siyaasi rug-caddaa ah oo waayo arag ah waana inta aynu dheer nahay dalalka Bariga iyo Badhtamaha Afrika.
Madaxa weftiga gaar ahaan beenta iyo huuhaada wuu akhriyayey waxa u dheeraa is qaad-qaad iyo isla weyni aad looga dareemayey. Dadku kamay baqayn sidii wakhtigii kacaanka oo kale laakiin iyaga oo wax kastaba og waxay muujiyeen dulqaad iyo inay ku qaabilaan niyad-sami maadaama oo ay ahaayeen madaxdii qaranka oo haddana iyaga marti u ah.
Gabiley.net marnaba masuul kama aha Aragtida dadka kale. Qoraaga ayaa xumaanteeda, xushmadeeda iyo xilkeda sida. waxa kaliya oo Gabiley.net dhiirigalinaysaa, isdhaafsiga aragtida, canaanta gacaliyo talo wadaagga
Afhayeenka Wadani Oo Ka Warbixiyay Shirkii Hogaanka Fulinta Ee Xisbigaasi…
Gabiley:- Ayaa Waxa Faynal Iskaga Horyimiday Kooxaha Asalka Boorama Iyo…
Wararki ugu danbeeyay ee xanuunka COVID-19
Turkiga Oo Mar kale U Digay Dalalka Midowga Yurub.
Biden oo raalli geliyay ciidamo la sheegay inay seexdeen goob…
Biden oo doonaya in dib u eegis lagu sameeyo heshiskii…
Dibadbaxyo xooggan oo ka socda Ruushka
Ciidanka Uganda oo sheegay in ay dileen 189 ka tiran…
Qarax lala Eegtay Mas’uuliyiin Oo Goor-dhawayd ka Dhacay Muqdisho.
Guddoomiye Ciro Muxuu U Sheegay Gudida Fulinta Xisbiga Ee Uu…
Musharaxiinta Kulmiye Ka Soo Cadhooda Anaga Iska Leh Gudoomiye Faysal